Tenisy – Amboaran’i Afrika Aostraly: hihaona amin’ny famaranana i Randy sy i Miotisoa | NewsMada
Tenisy – Amboaran’i Afrika Aostraly: hihaona amin’ny famaranana i Randy sy i Miotisoa
Mitombo ny ezaka ho an’ny solontena malagasy miatrika ny fiadiana ny amboaran’i Afrika Aostraly any Namibia. Manana solontena amin’ny sokajy rehetra hiatrika ny famaranana ho amin’ny anio i Madagasikara.
Tsara ny vokatra ho an’ny Malagasy miatrika ny lalao any Namibia. Ho amin’ny lalao famaranana anio, adin’ny samy Malagasy no ho hita eo amin’ny sokajy U14 vehivavy, olon-tokana satria samy tafakatra i Randy sy i Miotisoa. Nomontsanin-dRakotoarilala Randy tamin’ny seta 2 no ho 0 (6/1 6/1) i Khabele (Lesotho). Tetsy ankilany, nolavoin-dRasendra Miotisoa tamin’ny sera 2 no ho 1 (6/7 6/2 10/6) ilay teratany zimbaboeana antsoina hoe Tanya. Tsy nahomby kosa ireo roa vavy, teo amin’ny sokajy U16 olon-tokana. Raraka teo amin’ny lalao manasa-dalana nanoloana ny mpifanandrina taminy i Mialy sy i Narindra. Na izany aza, nanome valin-kafatra tsara izy roa vavy ireto tamin’ny lalao ho an’olon-droa ka tafakatra amin’ny dingana famaranana rehefa avy niady mafy nandritra ny lalao manasa-dalana, notanterahina omaly. Eo amin’izay olon-droa vehivavy izay ihany, tafita amin’ny dingana manaraka ihany koa i Maholy miaraka amin’i Nicole (Zimbaboena) (6/1 6/2).
Tsara toerana i Toky
Anisan’ny ho tazana amin’ity famaranana ity ihany koa ny eo amin’ny sokajy lehilahy U16, Ranaivo Toky. Ity farany izay nanamarika isa mavesatra hatrany nandritra ny lalao rehetra nandraisany anjara. Raha tsiahivina ny tamin’ny lalao manasa-dalana, niondrika teo anatrehan’i Toky tamin’ny seta 2 no ho 0 (7/6 6/2) ilay teratany Afrika Atsimo Connor Kruger , taorian’ny nandavoany an’i Rohan Loubser tamin’ny seta 2 no ho 1 (6/4 3/6 10/5). Etsy ankilany, mbola tafakatra ihany koa ny solontena malagasy olon-droa U14, i Finoana sy i Mahefa ka hanatevin-daharana ireo miatrika ny lalao famaranana. Lalao miisa 5 araka izany no miandry ny raketra malagasy, anio. Samy maneho ny fahavononana izy ireo ary miandrandra fandresena avokoa.